एके स्टील बॉन्ड्स, छोटो अवधि, उच्च उपज, निश्चित आय लगानी, १०.०% वाईटीएम उत्पादन - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी २ बी मार्केटप्लेस समाचार
एके स्टील बॉन्ड, छोटो अवधि, उच्च उपज, निश्चित आय लगानी, उत्पादन 10.0% YTM
अगस्ट 16, 2019 सेप्टेम्बर 11, 2019 डोका कुकुरहरू ब्लग, बन्धन, व्यापार, कर्पोरेट बन्धन, विशेष समाचार, स्थिर आय, निवेश
कुल आय २.२ २०१ Net मा १ 18% ले वृद्धि भयो।
समायोजित EBITDA 2% वर्ष-बर्ष बढ्यो।
जून 30०, २०१ 2019 समाप्त हुने months महिनाका लागि अपरेटिंग गतिविधिहरूबाट शुद्ध नगद प्रवाह १$136.2.२ मिलियन डलर हो।
२०१ 2019 को पहिलो छ महिनाको ब्याज कभरेज २.०x थियो।
यो हप्ता, दुर्ग राजधानी संयुक्त राज्य अमेरिकाका स्टिल उत्पादनहरूको एक प्रमुख उत्पादकको समीक्षा गर्दछ। एके स्टील (NYSE: AKS) मोटर वाहन, पूर्वाधार र निर्माण क्षेत्रहरु को लागी इस्पात उत्पादन गर्दछ। अमेरिकामा उत्पादनको रोजगारी फिर्ता ल्याउने धेरै कुरा भएको छ, विशेष गरी इस्पातको उत्पादन र निर्माणमा। एके स्टिल संयुक्त राज्य अमेरिका मा निरन्तर भारी निर्माण क्षमताहरु सुनिश्चित गर्न को लागी एक कम्पनी हो। हालसालै यसको दोस्रो त्रैमासिक परिणामहरू रिपोर्ट गरियो (जून 30, 2019 अन्त्य हुने तीन महिनाका लागि) हाइलाइटहरूको साथ (माथि सूचीबद्ध)।
लगातार तेस्रो क्वाटरमा, एके स्टीलले फेरि आय अपेक्षाहरू पिटेर विश्लेषकहरूलाई चकित पारे। कम्पनीले क्वार्टरमा प्रति शेयर (EPS) प्रति शेयर earn ०.११ कमाई रिपोर्ट गरेको छ, ० the$ डलरको सहमति अनुमानलाई ०.0.21 डलरले हरायो। कम्पनीले आयसम्बन्धी विश्लेषकहरूलाई आश्चर्यचकित मात्र गर्दैन, यसले quarterण घटाउने कार्य जारी राखेको छ, दोस्रो क्वाटरमा यसको facilityण सुविधा अन्तर्गत $ million मिलियन bण फिर्ता गर्दै। एके स्टीलका २०२0.06 बन्डहरू, 0.15..95% मा कूपन गरिएको, हाल छुटमा ट्रेड गर्दैछ, जुन लगभग १०.०% को प्रतिस्पर्धी उत्पादन-परिपक्वतामा अनुवाद गर्दछ। लगानीकर्ताले आफ्नो विभागलाई थप विविधीकरण गर्न खोज्दै छन्, एके स्टील आदर्श प्रत्याशा हुन सक्छ। र कम्पनीको निरन्तर कडा प्रदर्शनको आधारमा यी बॉन्ड्स दुर्ग क्यापिटलको लागि उत्कृष्ट जोड देखिन्छ निश्चित आय2(FX2) उच्च उपज प्रबन्धित आय पोर्टफोलियो, को एकत्रीकृत प्रदर्शन को तल देखाइएको छ।
EPS मा यसको तेस्रो लगातार हरा साथ, एके स्टीलले यसको दोस्रो त्रैमासिक परिणाम रिपोर्ट गर्‍यो। कार्बनमा हेडविन्ड्सको बाबजुद स्थान बजार मूल्य निर्धारण एक बर्ष पहिलेको तुलनामा कम्पनीले दुवै शुद्ध आय र समायोजित EBITDA मा पोष्ट गरेको छ।
दोस्रो त्रैमासिकको कुल आम्दानी $.66.8..56.6 मिलियन डलर थियो जबकि year$.। मिलियन डलरको तुलनामा, जुन एक बर्ष अघि १%% बढी थियो।
समायोजित इबीआईटीडीए १$१..151.5 मिलियन डलर थियो, जुन २०१ quarter को दोस्रो त्रैमासिकमा १148.4..2018 मिलियन डलर हो, यसले २% वृद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
कम्पनीले दोस्रो क्वाटरमा its its मिलियन डलर ingsण फिर्ता गरेको छ।
जून 30०, २०१ 2019 समाप्त हुने छ महिनाको लागि, अपरेटिंग गतिविधिहरूबाट शुद्ध नगद प्रवाह १ tot flow.२ मिलियन डलर हो।
रोजर न्यूपोर्ट कार्यकारी उपाध्यक्ष, वित्त र मुख्य वित्तीय कार्यकारी अधिकारी मे २०१ to देखि डिसेम्बर २०१ from; वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वित्त र मुख्य वित्तीय अधिकारी मे २०१ 2015 देखि; उप राष्ट्रपति, वित्त र मुख्य वित्तीय अधिकारी मे २०१२ देखि; उपाध्यक्ष, जूनदेखि व्यापार योजना र विकास
रोजर न्यूपोर्ट, एके स्टीलका मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्रो क्वाटरमा कम्पनीको सफलताहरूको बारेमा बोले।
एक वर्ष अघि कार्बन स्पट बजार मूल्य निर्धारणमा नाटकीय गिरावट भए पनि हामीले दोस्रो क्वाटरमा ठोस आम्दानी रिपोर्ट गरेका छौं। यसले स्थिर मूल्य मूल्य अनुबन्धको साथ मूल्य-वर्धित उत्पादनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न र अस्थिर वस्तु स्थान बजारमा बिक्री डिम्फेसाइज गर्न हाम्रो रणनीति झल्काउँछ। परिणाम स्वरूप, हामीले कडा निःशुल्क नगद प्रवाह उत्पन्न गरेका छौं जसले हामीलाई क्वाटरमा अर्थपूर्ण debtण कम गर्न अनुमति दियो। "
एके स्टीलको बारेमा
एके स्टील फ्लैट रोल्ड कार्बन, स्टेनलेस र विद्युतीय इस्पात उत्पादनहरूको एक अग्रणी उत्पादक हो, मुख्य रूपमा विद्युतीय शक्ति, र वितरक र रूपान्तरण बजार सहित मोटर वाहन, संरचना र निर्माणको लागि। यसका सहायक कम्पनीहरूको माध्यमबाट कम्पनीले ग्राहक समाधानहरू पनि प्रदान गर्दछ कार्बन र स्टेनलेस स्टील टयूबिंग उत्पादनहरू, मर्नुहोस् डिजाइन र टुलिing्ग, र तातो र चिसो स्ट्याम्प्ड घटक। ओहियो (ग्रेटर सिनसिनाटी) वेस्ट चेस्टरमा मुख्यालय रहेको यस कम्पनीका लगभग,, 9,500०० कर्मचारीहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा निर्माण कार्यका साथै पश्चिमी यूरोपमा सुविधा रहेका छन्। एके स्टील सार्वजनिक रूपमा आयोजित कम्पनी हो जसमाथि ट्रेड छ न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज (NYSE) प्रतीक अन्तर्गत अक्स र फोर्ट्युन 500०० को एक कम्पोनेन्ट हो - कम्पनीलाई अमेरिकाका धेरै प्रख्यात निगमहरूको साथ पign्क्तिबद्ध गर्दै।
एके स्टीलको अधिकांश व्यवसाय मोटर वाहन उद्योगबाट आएको हुनाले घरेलु कार उद्योगलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने कुनै पनि कानूनलाई स्वागत र प्रोत्साहन दिइन्छ। अमेरिकाका धेरै व्यक्तिहरू यससँग परिचित छन् उत्तर अमेरिकी निःशुल्क व्यापार सम्झौता (नाफ्टा) जुन १ 1994 2.0 in मा प्रभावमा परेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्प नाफ्टाका मुखर आलोचक हुनसक्छन्, कहिलेकाँही सम्झौतामा अमेरिकीको सहभागिता फिर्ता लिने धम्की पनि दिन्छन्। ट्रम्प भन्छन् कि यो सम्झौता अमेरिकी कामदारहरु को लागी हानिकारक छ र नाफ्टा vXNUMX को लागी पैरवी गर्दैछ, जुन अनिवार्य छ संयुक्त राज्य अमेरिका - मेक्सिको - क्यानाडा समझौता (USMCA) संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यहाँ यूएसएमसीए का प्रावधान छन् जसले मोटर वाहन उद्योगलाई फाइदा पुर्‍याउँछ र विस्तारमा एके स्टील जस्ता कम्पनीहरूले।
अटोमोबाइल्सको उनीहरूका their 75% कम्पोनेन्टहरू अमेरिका, क्यानडा वा मेक्सिकोमा शून्य ट्यारिफको लागि क्वालिफाइ हुन आवश्यक छ, AF२.%% बाट नाफ्टा अन्तर्गत।
%०% देखि% 40% मोटर वाहन कम्पोनेन्टहरू कामदारहरूले बनाउनु पर्छ जसले २०२45 सम्ममा कम्तिमा १$ डलर प्रति घण्टा कमाउँछ।
सबै तीन देशहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, तर मेक्सिको तीनले मात्र सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। क्यानडाको संसद र अमेरिकी कांग्रेस अझै सम्झौताको राम्रा बुँदाहरूमा बहस गर्दैछन्। सडकमा पछिल्लो शब्द यो छ कि अमेरिकाले यस गिरावटमा सहमति जनाउनेछ, २०२० को चुनावको बाँकी रहेको पछाडि ताप्न थाल्नु अघि।
अल्ट्रा उच्च-शक्ति स्टील्स को उपयोग मा वृद्धि
अटोमोटिव बजार भित्र, उच्च शक्ति इस्पात एक मूल्यवान वस्तु बनेको छ। बढ्दो कुशल सवारीसाधनको खोजीमा, वाहन निर्माताहरूले ईन्धन दक्षता बढाउनका लागि सवारीहरू हल्का बनाउने प्रयास गरिरहन्छन्। सवारी सवारी निर्माताहरूले आज उत्पादन an 75 पाउण्डको औसत गर्दछ अल्ट्रा उच्च-शक्ति इस्पात (UHSS) त्यो राशि २०320२ सम्ममा प्रति गाडी औसत 2025२० पाउन्ड चार गुणा बढी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। के UHSS भौतिक रूपमा एक वाहन र / वा यसको घटकहरूको वजन कम गर्दछ? अवयवहरूमा युएचएसएसको साथ भारी स्टिललाई प्रतिस्थापन गर्नाले, विशिष्ट घटकामा निर्भरता तौल अनुरूप १०% र %०% बीचमा छ। यसले एक महत्त्वपूर्ण तौल घटाउने प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले बारीमा, अतिरिक्त ईन्धन दक्षतालाई बढावा दिन्छ। यस कारणले, अटो निर्माणकर्ताहरूले आफ्नो गाडी डिजाइनमा यूएचएसएस घटकहरूको संख्या बढाउन जारी राख्दछन्। अहिले र २०२10 बीचमा, UHSS को उपयोग २ 60% को CAGR ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
(स्रोत: एके स्टील अप्रिल २०१ Invest लगानीकर्ता प्रस्तुति)
यसको सबैभन्दा पछिल्लो त्रैमासिकमा, एके स्टिलको शुद्ध बिक्रीको% 64% मोटर वाहनमा थियो। संगत रूपमा, कम्पनीले आफ्नो अति उच्च शक्ति इस्पात उत्पादनको विकासमा उल्लेखनीय लगानी गरेको छ - NEXMET 1000 र NEXMET 1200। यसको टोलीसँग संयोजनमा प्रेसिजन पार्टनर प्रभाग, एके स्टिलको अनुसन्धान समूहले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि स्टील समाधान विकास गर्न जारी राख्यो।
पर्याप्त ब्याज कभरेज एक बांड जारीकर्ताको लागि महत्वपूर्ण छ, तरलता हो। ब्याज कभरेजको सरल अर्थ भनेको जारीकर्ताले उनीहरूको हालको levelणको स्तर कभर गर्नको लागि पर्याप्त नगद प्रवाह उत्पन्न गर्दछ। तरलता नगद प्रवाहमा कुनै आवधिक कमी को कभर गर्न महत्त्वपूर्ण छ। जून 30०, २०१ 2019 मा समाप्त हुने months महिनाको लागि, एके स्टिलको १ operating147.8..75.0 मिलियन डलरको आय र २.०x को ब्याज कभरेजको लागि $$.० मिलियन डलरको आय थियो। तरलताको सर्तमा, जून 2.0०, २०१ of सम्म, एके स्टीलको कुल तरलता १.१ बिलियन डलर थियो, जसमा नगद in२.२ मिलियन थियो। तरलताको यो स्तर कम्पनीको आगामी परिपक्वता १ November million मिलियन नोभेम्बर २०१ exchange मा विनिमय नोटमा कभर गर्न पर्याप्त छ। साथै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कम्पनीको facilityण सुविधा क्षमता अप्रिल २०१ in मा बढेर १.$ अर्ब डलर भएको थियो।
एकल स्टील बॉन्ड्स, अग्रणी वित्तीय समाचार, बजार अनुसन्धान, र अधिकमा अपडेट प्राप्त गर्न साइन अप गर्नुहोस्।
धितोधारकहरूको लागि जोखिम यो हो कि एके स्टिलले नाफा कम गर्न जारी राख्नुपर्दछ debtण घटाउन जारी राख्न। मोटर वाहन उद्योग चक्रीय हुन सक्छ र त्यो "भोज वा अकाल" मानसिकता हुन सक्छ। स्वत: निर्माण र बिक्रीसँग सम्बन्धित उद्योगहरूले यस्तै अस्थिरता अनुभव गर्न सक्दछ। यद्यपि यी चीजहरूको बाबजुद पनि, एके स्टिलले प्रदर्शन गरिरहेकै छ, कार्बनको मूल्य बढेको छ र कार्बनको तातो कोल्डमा स्पॉट मार्केटको मूल्य हालैका महिनाहरूमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। यसको सबैभन्दा पछिल्लो त्रैमासिकको लागि, कम्पनीले आधार मूल्य सम्झौतामा ध्यान केन्द्रित गरेको र अस्थिर कार्बन कमोडिटी स्पट मार्केटमा कम जोड दिएर क्यु २2 तुलनाको तुलनामा यसको औसत फ्ल्याट रोल्ड बिक्री मूल्य कायम गर्यो। यी कारकहरूको विचारमा, एक्य स्टिलको २०२2018 बन्डमा करीव १०.०% उपज-परिपक्वता पहिचान गरिएको जोखिमलाई उछिन्ने देखिन्छ।
फोकस व्यक्तिगत बन्धन चयनमा हुनु हुँदैन, बरु सम्पूर्ण कम्प्युटरमा व्यवस्थित पोर्टफोलियोमा कसरी कम्पोनेन्टहरू काम गर्दछन्, जस्तै ड्रिग क्यापिटलको। स्थिर आय2(FX2) प्रबन्धित आय पोर्टफोलियो.
डुरिग क्यापिटलसँग धेरै उच्च उपज रणनीतिहरू उपलब्ध छन्:
अमेरिका र विदेशी मुद्रा छोटो बन्ड पोर्टफोलियो
एके स्टील अगाडि फोर्ज गर्न जारी छ। जबकि २०१ 2019 को लागि उत्तर अमेरिकी सवारी उत्पादन २०१ 2018 भन्दा थोरै कम हुने अपेक्षा गरिएको छ, यो अझै पनि ऐतिहासिक मापदण्डद्वारा धेरै बलियो छ। अमेरिका निर्माणलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ विचाराधिन कानूनमा र विशेष गरी अटोमोबाइल निर्माणसँगै, एके स्टीलले अनुमोदनबाट राम्रोसँग फाइदा लिन सक्दछ USMCA सम्झौता अब कांग्रेस अगाडि। एके स्टीलले आफ्नो ब्यालेन्स शीट सुधार गर्ने प्रयासमा विगत केही वर्षदेखि सक्रिय रूपमा downण तिर्दै आएको छ। यसको उच्च शक्ति इस्पातको लागि माग बढ्दो छ। कम्पनीको २०2025 बॉन्ड लगानीकर्तालाई उनीहरुको पोर्टफोलियोलाई मोटर वाहन क्षेत्रमा विविधिकरण गर्ने अवसर हो। यी बन्धनहरू हाल छुटमा ट्रेड भैरहेको छ, उत्पादन-देखि-परिपक्वता एक उत्कृष्ट १०.०% छ, यी प्रतिस्पर्धी उपज नोट्स डुरिग क्यापिटल को एक आदर्श थप बनाउने निश्चित आय2(FX2) उच्च उपज प्रबन्धित आय पोर्टफोलियोमाथि देखाईएको छ।
जारीकर्ता: एके स्टील कर्प
टिकर: (NYSE: AKS)
परिपक्वता: 10 / 15 / 2025
रेटिंग्स: B3 / B-
परिपक्वता को लागी: ~ 10.0%
प्रकटीकरण: डुरिग क्यापिटल र केहि ग्राहकहरूले एके स्टिलको अक्टूबर २०२। बॉन्डमा पदहरू लिन सक्दछन्।
एके स्टील अक्स मोटर बन्ड अनुसन्धान बन्धन सांप्रदायिक समाचार मर्ने डिजाइन दुर्ग राजधानी विद्युत स्थिर आय निश्चित आय2FX2 धेरै उब्जनी तातो र चिसो स्ट्याम्प्ड घटक आय पूर्वाधार हल्का स्टिल विनिर्माण NAFTA NEXMET 1000 NEXMET 1200 NYSE NYSE: AKS प्रेसिजन पार्टनरहरू रोजर न्यूपोर्ट छोटो समय छोटो अवधि का बन्धन इस्पात इस्पात ट्यूबिंग स्टील टयूबिंग उत्पादनहरू औजार संयुक्त राज्य अमेरिका USMCA समझौता
तीतो आधा वा राम्रो आधा? - विवाहमा सकारात्मक र नकरात्मक सन्तुलन
डेनमार्क सरकारबाट ग्रीनल्याण्ड किन्नमा ट्रम्प रुचि राख्नुहुन्छ